Maamulka Gobolka banaadir oo digniin udirey kooxo Dhac ka geysanaya gudaha magaalada muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Maamulka Gobolka banaadir oo digniin udirey kooxo Dhac ka geysanaya gudaha magaalada...
Maamulka Gobolka banaadir oo digniin udirey kooxo Dhac ka geysanaya gudaha magaalada muqdisho
Maamulka degmada Dharkeenley ayaa howla kormeer ah ku sameeyay xaafadaha degmadaasi si uu ugu kuurgalo amniga iyo horumarka degmada ka socda, iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay Shacbaka ka cabanayeen Kooxo dhac geysanaya.
Maamulka degmada Dharkeenley waxaa kormeerkaasi ku wehlinaaye qaar kamid ah maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ee qeybta ah golaha iskaashiga degmooyinka Muqdisho.
Guddoomiyaha degmada Dharkenley ee Gobolkan Banaadir Abuukar Axmed Cadow ayaa sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan Kooxaha hubeysan ee dhaca u geysanaya dadka Shacabka iyo cid kasta oo falal Amni darro ka geysta degmadaas.
Guddoomiyaha degmada Hodan Cabdi Xakiin Dhagajuun oo ku hadlayay Magaca guddoomiyeyaasha dgemooyinka ayaa sheegay in Maamulada degmooyinka ay iska kaashan doonaan dhinaca Amniga kana hortagayaan cid kasta oo lidi ku ah Amniga.
Hadalka digniinta ah ee kasoo yeeray Guddoomiyeyaasha degmooyinka Hodan iyo Dharkenley ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Shacabka ku nool degmooyinkaas ay saacadihii la soo dhaafay ka cabanayeen Kooxo Burcad ah oo dhac u geysanaya.